कसरी iMessage मा प्राप्तकर्ताको पूरा नाम हेर्न आईफोन समाचार
एप्पलले मोबाईल र कम्प्युटरहरूको लागि आफ्नो अपरेटि system प्रणालीमा थपेको अनुप्रयोगहरू मध्ये एक (OS X) iMessage थियो, एप्पल उपकरणहरू (iDevices वा म्याकहरू) भएका प्रयोगकर्ताहरू बीच सन्देशहरूको आदान प्रदानमा आधारित अनुप्रयोग। आईमेसेजले एक परिष्कृत ईन्क्रिप्शन प्रणाली समावेश गर्दछ जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई अधिकतम सुरक्षा प्रदान गर्दछ (एप्पलले के भन्छ भने अनुसार); यद्यपि अवसरमा, सर्भर संतृप्त हुन्छन् र अनुप्रयोग क्र्यास हुन्छ। अझै, यदि तपाईं कुरियर सेवाहरू टाढा रहन चाहनुहुन्छ भने WhatsApp वा स्काइप, iMessage यो तपाईको अनुप्रयोग हो यदि तपाईका साथीहरुको पनि एप्पल उपकरणहरु संग यो अनुप्रयोग छ। जब हामी एक प्राप्तकर्तासँग च्याट प्रविष्ट गर्छौं, अनुप्रयोगले मात्र हामीलाई पहिलो नाम देखाउँदछ। उदाहरण को लागी, यदि म लुइस पाडिल्ला को लागी एक सन्देश पठाउन चाहान्छु, जब म अनुप्रयोग भित्र कुराकानी प्रविष्ट गर्छु, कुराकानी को शीर्ष मा म मात्र उनको नाम (लुइस) देख्नेछु। हामीले के गर्नुपर्दछ कि एप्पल सन्देश सेवाले हामीलाई प्राप्तकर्ताको पूरा नाम देखाउँदछ?
मैले भनेको छु, आज हामी प्राप्तकर्ताको पूरा नाम देखाउन सिक्दछौं जसलाई हामी iMessage मार्फत सन्देशहरू पठाउँदै छौं। त्यो हो, यदि हामी कुराकानी प्रविष्ट गर्छौं भने मात्र हामी नाम मात्र प्रदर्शित हुन्छौं भनेर देख्दछौं, यो अवस्थामा यो लुइस (माथिल्लो छवि) हो। त्यसोभए, यदि हामी यो पहिलो र अन्तिम नामहरू देखाउन चाहन्छौं भने तपाईंले पढिरहनु पर्छ।
IMessage मा प्राप्तकर्ताको पूरा नाम प्रदर्शन गर्दै
प्रविष्ट गर्नुहोस् सेटिंग्स तपाईंको उपकरणबाट
सेक्सन खोज्नुहोस्: «मेल, सम्पर्क, क्यालेन्डर»र यसलाई प्रविष्ट गर्नुहोस्।
यस सेक्सन भित्र, तपाईंले विकल्प खोज्नु पर्छ: «छोटो नामCalled उप-सेक्सनमा अवस्थित सम्पर्कहरू भनिन्छ।
समारोह "छोटो नामधेरै सम्भावनाहरू छन्। तिनीहरू मध्ये केही हेरौं:
पहिलो प्रारम्भिक + अन्तिम नाम
तपाईंले केवल IOS मा जहाँसुकै पनि आफ्ना सम्पर्कहरू देखाउनको लागि सबैभन्दा बढी मनपर्ने विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त, यदि तपाईं सबै स्थानहरूमा तपाईंको सम्पर्कहरूका सबै नामहरू र थरहरू देखिन चाहनुहुन्छ भने, केवल प्रकार्य निष्क्रिय गर्नुहोस्: «छोटो नाम »
थप जानकारी - हामी iMessage थ्रेडमा भएका सबै छविहरू कसरी हेर्ने?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» कसरी iMessage मा प्राप्तकर्ता को पूरा नाम हेर्न
डकशिफ्ट, तपाईंको डकको उपस्थिति परिमार्जन गर्नुहोस् (Cydia)